Soomaaliya oo dalbatay 3 Sheybaar oo casri ah, kuwaas oo lagu ogaanayo Caabuqa Corone-Virus
March 28, 2020 NEWS 6
MUQDISHO(P-TIMES) – Xukuumadda Faderaalka ee Soomaaliya waxay dalbatay in si deg deg ah loogu keeno Sadex Sheybaar oo casri ah, kuwaas oo lagu ogaanayo Caabuqa Corone-Virus, waxayna sheegtay in ay muhiim tahay in la helo adeeg deg deg ah, waxayna xooga saarayaan sidii loo heli lahaa wax deg deg ah.
Wasiirka Caafimaadka Fowsiyo Abiikar ayaa sheegtay inay rajeynayaan in qalabkaas uu dalka soo gaaro labo illaa iyo saddex todobaad gudahood, taas oo ay ku helayaan kaalmada caalamiga ah.
Sheybaarkan ayaa marka dalka la keeno waxaa ku xigi doonta in shaqaalaha ku shaqeyn doona la tababaro.
Soomaaliya ayaa xilligan baaritaanka dheecaanka qofka looga shaki qabo cudurka Coronavirus u dirta dalka dibaddiisa, gaar ahaan sheybaarka Hey’adda WHO ku leedahay dalka Kenya, kaasoo natiijada baaritaanka qaata muddo todobaadyo ah.
Illaa saddex kiis oo ah cudurka Coronavirus ayaa laga helay Soomaaliya, mid ka mid ah saddexda ruux ee laga helay waxaa uu u dhashay dalka India, kaasoo ah qandaraasle u shaqeeya Qaramada Midoobey.
Warka DFS’ka is burin badanaa.
Soo ayagii yiri ALIBABA ayaa qalabkii nagu caawiyey. Mise waxaa loo keeney af iyo daba tirtiris.
Mise afsomaaliga ayaa ka khaldan.
‘Qalab’ equals ‘Equipments’ not ass-wipes
Lab iyo face mask are both medical instrument toward covid 19.
Qooqaa mudug says:
Waxaa jira dad aragtidoodu gaaban tahay aqoontooduna yartahay hadana aan waayo arag ahayen oo ay ugu darsantay cuqdad iyo qabyaalad madax martay guud ahaan waa jaahilnimada calaamadaheeda.
Waxaa kadhigan dadka noocaas ah kuwo isku bagacaabay boodhari iyo abdiwali shame on you guys
Saaxiib goobtan in afkaarta iyo doodaha lagu wadaago oo la isku aqoon weydaarsado ayaa lagu talo galay. Haddii aad ka jaahilsan tahay dadku muujinta fikradahooda iyo dareenkooda waa u xor oo xaq buuxa ayay ku leeyihiin.
Anaga jaahiliin iyo caamo nagu tilmaantay ee waxaad ogaataa in ilbaxdu ay fahansan tahay in aanay khassab ahayn in fikradahooda iyo aragtidooda lagu raaco oo haddii ay cid wax ka diiddan yihiin na ay daliisheeda oo caddaan ah madasha soo dhigaan.
Astaamahaas aad nagu sheegtay waa kuwa ay caanka ku yihiin dadka caayda iyo aflagaaddada caadeysta. Inteenani dhaqan xumadaas nala kuma yaqaanno ee biyadhacaaga noo sheeg.
Waxaan intaas kuu raacinayaa in aan ogahay in aanad Mudugaawi iyo wax ku dhaw toon ahayn ee oo aad magacan isku soo hoos qarisay. Waxaad miskiin yar oo ama SNM ah ama se ah kuwa kabaha afka ugu sida ee Sool, Sanaag iyo Cayn ka soo jeeda. Halka aad iga dilayso na si fiican baan u garanayaa laakiin ogoobeey caay cidna wax kaga qaadi maysid oo qaddiyaddaada na waxba u tari mayso in ay naga sii fogayso mooyaanee. Axsan nin rag ah sidiisa iska caddeyso oo toos noo qaabil.